बिकास /परिवर्तन – Page9– Dhading's First Online News Portal
काठमाडौँ । देशभरिका सरकारी अस्पताललाई चार तहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ सङ्घीय संरचनामा चार तहका अस्पताल रहने व्यवस्था गरेसँगै सरकारी अस्पताल पनि चार तहमा विभाजित हुने भएका छन् । नयाँ बन्ने संरचनामा गाउँ तथा नगरस्तर, प्रदेशस्तर र केन्द्रीयस्तरका प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय र विशिष्टीकृत गरी चार स्तरका..
विश्वभरीका झण्डै तीस करोडभन्दा बढी मानिसमा मानसिक समस्या रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायले विश्व स्वास्थ्य दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । डब्लुएचओका महानिर्देशक मार्गरेट चानले भन्नुभयो, “यो तथ्याङ्कले मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा सबै देशहरुले..
स्तनको आकार फरक–फरक किन हुन्छ ?
महिलाको छातीमा रहेका दुईवटा विशेष प्रकारका बाहिरी अंगलाई स्तन भनिन्छ । स्तनलाई सौंदर्यको प्रतिकका रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । स्तनको भित्रि भागमा रहेका ग्रन्थीले सन्तान भएपछि शिशुको पोषणका लागि दूध बनाउँछ । स्तन यौनको दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ । बालिका किशोरावस्थामा पुगेपछि हर्मोनको प्रभावले बालिकामा रहेका स्तनको..
काठमाडौं । सरकारले चैत १ गतेदेखि जथाभावी चुरोट बेच्न र किन्नको लागि मनाही गरेको छ । जथाभावी रुपमा धुम्रपान तथा सुर्ति सेवनका कारण मानिसको स्वास्थमा असर परेको भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । धूम्रपान तथा सूर्ती सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्न इजाजत लिएका पसलबाट मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था..
वैशाख देखि मिर्गौला प्रत्यारोपण पनि निःशुल्क
काठमाण्डौ,- यसै वर्षदेखि मिर्गौला रोगीको निःशुल्क डायलासिस गरेको सरकारले आगामी वर्ष वैशाख १ गतेदेखि प्रत्यारोपण सेवा पनि निःशुल्क गर्ने भएको छ । विश्व मिर्गौला दिवसका अवसरमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र आरोग्य प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य कर कोषको रकम स्वास्थ्य सेवामा..
कल्पना पौडेल काठमाडौँ– गर्मीयामको सुरुआतसँगै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा ज्वरोको उपचार गर्न आएका एक व्यक्तिमा स्वाइन फ्लु देखिएको छ। अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनले ललितपुरका एक पुरुषमा सो रोगको भाइरस पुष्टि भएको जानकारी दिए। नेपालमा गत वर्षको बर्खायाममा स्वाइन फ्लुको भाइरस देखिए पनि यस..
फाल्गुन २०, - गर्मीयामको सुरुआतसँगै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा ज्वरोको उपचार गर्न आएका एक व्यक्तिमा स्वाइन फ्लु देखिएको छ । अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनले ललितपुरका एक पुरुषमा उक्त रोगको भाइरस पुष्टि भएको जानकारी दिए । नेपालमा गत वर्षको बर्खायाममा स्वाइन फ्लुको भाइरस देखिए पनि यस पटक निकै..
काठमाडौँ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ५८ प्रतिशत महिलाले अझै असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति वा तालिम नलिएका व्यक्तिबाट गराइने गर्भपतनलाई असुरक्षित गर्भपतनका रुपमा लिइन्छ । नेपालमा सन् २०१४ मा करिब तीन लाख २३ हजार गर्भपतन भएकामा ४२ प्रतिशतले मात्र..
काठमाडौं । छ वर्षको अवधिमा नेपालमा महिला यौनकर्मीहरुको संख्या दोब्बर भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा सन् २०१० मा महिला यौनकर्मीहरुको संख्या करिब २८ हजारको हाराहारीमा थियो । सन् २०१६ सम्ममा उक्त संख्या बढेर झण्डै ५३ हजार पुगेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र टेकुले जनाएको छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण..
औषधिमा उपभोक्ता ठगिदै,१५ गुनाभन्दा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य
काठमाडौं । मुलुकमा बन्ने र विदेशबाट आयात गरिने औषधि उत्पादन मूल्यको दाँजोमा १५ गुना बढी मूल्यसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । औषधिको लागत मूल्यमा कति प्रतिशतम्म थपेर उपभोक्ताका लागि अधिकतम खुद्रा मूल्यमा निर्धारण गर्ने भन्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले यस्तो मनोमानी भएको हो । उत्पादक र सप्लायर्सले बढी मूल्यमा औषधि बेच्दा..
काठमाडौं । ब्युटिसियन एलिसा लेप्चा, जाडोमा अधिकांशको समस्या हुन्छ, छाला फुस्रो हुने । तुलनात्मक रूपमा सुक्खा छाला भएकालाई जाडोमा यो समस्याले झन् बढी सताउँछ । चिल्लो छाला हुनेलाई पनि नुहाएपछि छाला फुस्रो हुने खतरा निम्तिन सक्छ । त्यसो भए जाडोमा छाला फुस्रो हुनबाट कसरी जोगिने ? कस्ता कुरामा ध्यान दिन सके छालाको कोमलता र चिल्लोपन कायम..
चिया र कफी नपिउने मानिस सायदै होलान्। घरमा पाहुना आउँदा होस् या साथीसंगी भेटघाट हुँदा चिया–कफीको अफर चलिहाल्छ। चिया धेरै नेपालीले पिउने पेय पदार्थमा पर्छ। सबै उमेरका व्यक्तिले पिउन सक्ने चिया १८औं शताब्दीदेखि नै चीनमा उपभोग गरिँदै आएको इतिहास पाइन्छ। यसको वैज्ञानिक नाम क्यामेलिया साइनेन्सिस हो । बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीको..
पुक्क पेट घटाउने १० घरेलु उपाय
१, बिहान उठ्नेबित्तिकै मनतातो पानीमा कागतीको रस राखेर पिउँदा पेटको बोसो घट्छ । यसले मेटाबोलिजम दुरुस्त रहन्छ र तौल कम गर्न पनि मद्दत मिल्छ । २, बिहान काँचो लसुन खाने बानी गर्नुहोस् । यसले शरीरलाई निकै फाइदा गर्छ । बिहान लसुनको दुई या तीन पोटी चपाएपछि तातोपानीमा कागती हालेर पिउनाले बोसो घटाउन मद्दत गर्छ । यसबाट मोटोपना घट्ने..
निजी औषधि पसलमा ९० रुपियाँ पर्ने औषधि अब एघार रुपियाँमै
काठमान्डौ । थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले आफ्नै औषधि पसल (फार्मेसी) सञ्चालनमा ल्याएको छ । गतवर्ष सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी राख्नुपर्ने आदेश जारी गरेपछि सरकारी अस्पतालले फार्मेसी राख्न सुरु गरेका हुन् । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अमिरबाबु श्रेष्ठले..
धादिङ, १७ माघ-दक्षिणी धादिङको विकटमा रहेको किराञ्चोक गाविसलाई खोपयुक्त गाविस घोषणा गरिएको छ । यहाँका ९२ जना वालवालिकाले एक वर्ष मुनी लिुन पर्ने सवै खोप लगाएको १२ महिना देखि २३ महिनासम्मको वालवालिकाको प्रमाणित भएपछि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तारामान गुरुङले किराञ्चोक गाविसलाई सोमवार खोपयुक्त गाविस घोषणा गरेका हुन । सरकारले फागुन १..